Samsung ရဲ့ Under Display Camera ဖုန်း ဟာ 2020 အစောပိုင်းမှာ ထွက်ရှိလာနိုင် - PX
နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ သူတို့ဖုန်းတွေအတွက် 100 % Screen To Body Ratio အပြည့်ရဖို့ ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံကို ကြိုးစားရှာဖွေနေကြပါတယ်။ အဲ့လိုရဖို့အတွက် front camera ဟာ အကြီးမားဆုံး အတားအဆီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Punch-hole camera ၊ pop-up camera နဲ့ ကျောဘက်ကနေ လှည့်လို့ရတဲ့ Camera (Lenovo Z6) စတဲ့ နည်းပညာတွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အနာဂတ် အကောင်အထည်တွေကတော့ Front Camera ကို Display အောက်မှာထားပြီး ပိုပြီးစိတ်‌၀င်စားဖို့ ကောင်းလာတော့မှာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပထမဆုံး Under-display camera (OPPO နဲ့ Xiaomi က နည်းပညာ ချပြထားသလို) ကို 2020 ‌အစောပိုင်းမှာ တွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအသစ်ကတော့ Samsung ဟာ ထိုနည်းပညာအတွက် ထုတ်လုပ်မှု အများအပြားပြုလုပ်နေတယ်လို့ သတင်းပို့ထားလို့ပါ။
South Korean media website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Elec တင်ပို့ထားထားတဲ့ သတင်းအရ Samsung ရဲ့ Under Display Camera Technology (UDC) သုံးလာမယ့်ဖုန်းကို 2020 ပထမဆုံး ခြောက်လထဲမှာ ရောက်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Samsung Display မှာ သူတို့ရဲ့ နယ်မြေအ‌တွက် HIAA1 နဲ့ HIAA2 ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကို ယူဆောင်ထားပါတယ်။ HIAA ဆိုတာ Hole In Active Area ရဲ့ Standard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ဟာ HIAA1 Standard ကို punch-hole displays တွေမှာ စမ်းသပ်နေပြီး HIAA2 Standard ကတော့ Under Display Camera technology မှာ အသုံးပြုလာမှာပါ။ HIAA1 ဟာ Samsung ရဲ့နယ်ပယ်ကို August တုန်းက ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ များပြားတဲ့ UDC OLED panels ထုတ်လုပ်မှုဟာ H1 2020 မှာ စတင်ပြုလုပ်လာမယ့် မျှော်မှန်းထားပါတယ်။
OPPO under display camera technology
Samsung ရဲ့ Under Display Camera Technology ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လာမလဲ?
The Elec တင်ပို့ထားချက်အရ Samsung ဟာ HIAA2 Standard ပစ္စည်း ကိုအသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီး UDC ထားလာမယ့် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ Display ကို အသုံးပြုလာမှာပါ။ ပစ္စည်းမှာ Display ထဲတွင် အပေါက်အသေး များစွာကို ဖောက်ဖို့ laser တစ်ခုပါ၀င်ပြီး အောက်မှာထည့်ထားတဲ့ Camera ရဲ့ အလင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို တိုးတက်လာစေမှာပါ။ အဲ့လုပ်ငန်းဆင်ကို Laser Etching လို့ခေါ်ပါတယ်။ Samsung ရဲ့ လက်ရှိ R&D team ဟာ Pixels အရေအတွက် နဲ့ အရွယ်အစားကို လျော့ချဖို့ အာရုံစိုက်နေပါတယ်။ အဲ့အတွက် Camera ထားလာမယ့် ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုနေရာ နဲ့ အောက်ခံ စိမ့်၀င်ပျံနှံ့မှု တိုးလာမှာပါ။ အခုလက်ရှိ OLED အောက်ခံဟာ ဖောက်ထွင်းမမြင်နိုင်သေးဘဲ ဝါဖန့်ဖန့်အရောင်ပဲ ပါရှိပါတယ်။
ဒီလအတွင်းမှာ HIAA2 ကို စမ်းသပ်ပြီးနောက် Samsung Display ဟာ များပြားတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကို ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ်။ Under Display Camera အစစ်ကိုသုံးလာမယ့် Samsung ဖုန်းဟာ 2020 နှစ်၀က်လောက်မှာထွက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Samsung မှာ ထို Technology ကိုပြီးပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေတဲ့ အများအပြားရှိလာမှာပါ။ Display အောက်မှာ ထားမည့် Camera အတွက် OLED ကို Transparent ပြုလုပ်တဲ့အနေအထားအပြင် အခြားအနေနဲ့ Software algorithm ကိုအသုံးပြုပြီး Yellow Glow ဖြစ်တာတွေ Slight Blur ဖြစ်တာတွေကို ချိန်ညှိလို့ရပါသေးတယ်။ အဲ့တာဟာ အချိန်ပေးဖို့လို့‌သော်လည်း UDC Technology ဟာ လာမယ့် နှစ်တွေမှာ under-display fingerprint sensor လို တိုးတက်လာဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
2020 မှာ UDC ပါ၀င်လာမယ့် ဖုန်းအများအပြား ရှိလာနိုင်
Samsung ဟာ UDC technology ကို သူတို့ရဲ့ S series flagship မှာပါ၀င်လာမယ့် S11 မှာ သုံးလာဖို့ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထို Technology ဟာ နောက်နှစ် Galaxy Fold နေရာကို ဆက်ခံလာမယ့် ဖုန်းမှာလည်း သုံးလာနိုင်ပါသေးတယ်။
Xiaomi under screen camera technology
Samsung ဟာ Under Display Camera သုံးလာမယ့် ဖုန်းကို ပထမဆုံးထုတ်လာမယ့် ကုမ္ပဏီဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များမကြာခင်မှာ တစ်ခြား ကုမ္ပဏီ‌တွေပါ ထို Technology ကို သုံးလာဖို့ပါ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။ OPPO ၊ Xiaomi နဲ့ Honor တို့ဟာ Under Display Camera smartphone ကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi နဲ့ OPPO တို့ဟာ အရင်လတုန်းက သူတို့ရဲ့ နည်းပညာတွေကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေကောင်းအောင်ပြုလုပ်လာနိုင်မလား? အဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေ ရှေ့မှာရှိနေပါတယ်။